Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fifaninanana tononkalo fitiavana 2016
Fifaninanana tononkalo fitiavana 2016
Andinindininy momba ilay fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2016.
Indro ary ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana 2016 izay nokarakarain'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia. Ireo ambany ireo ny lohatenin'ny tononkalo, arahin'ny anaran'ny mpanoratra, ary ny isa azon'ilay tononkalo.
1 - Neniko ny Teniko nosoratan'i Dafy Noely
2 - Lala o nosoratan'i Volatiana Rahaga
3 - Hirahiran'ny Fitia nosoratan'i Soamiely Andriamananjara
4 - Izaho sy Ianao nosoratan'i Rina Randriamiarina
5 - Diary sy Sahala nosoratan'i Riman'ny fou
6 - Ny fitiavako Anao nosoratan'i Botsaiky Vkn
7 - Niangarana nosoratan'i Lanto Barry Sirjon
8 - Fitiavana nosoratan'i Randrianandrasana Laingo Fenomanitra Nomenjanahary
8 - Lasanao nosoratan'i Annie Tsiry Mampionona
10 - Rohy nosoratan'i Tokiniaina Joseclaudio
- Hary Razafy
- Johana Ra.
- Benja Ratsimba
Nizara andraikitra ny mpitsara ka i Mainty no nitsara ny tsipelina, Hary sy Johana, ary i Benja kosa no nitsara ny ambiny (hatsaran'ny tononkalo, firafiny, sns.) manaraka ireo fitsipika mifehy ny fifaninanana. Azonareo jerena ao amin'ny pejin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ao amin'ny Facebook ny antsipirihan'ireo fitsipika ireo.
Momba ny Tsipelina
Mitovy amin'ny fomba fitsarana tsipelina mahazatra ihany dia nomena isa 10 avy hatrany ny tononkalo tsirairay. Mihena avy hatrany io isa io isaky ny diso tsipelina mitranga ao amin'ilay tononkalo. Notsaraina daholo tamin'ity na ny teny diso fanoratra na ny tsy fanajana ny mari-piatoana.
Tononkalo iray ihany no tsy nahitana diso tsipelina mihitsy, izay singanina manokana eto, dia ny tononkalo Izaho sy Ianao nosoratan'i Rina Randriamiarina. Ny ambiny dia nahitana diso daholo ary maro ny nahazo isa 0/10.
Ny manome ny loka amin'ity fifaninanana ity dia mpikambana iray ao amin'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko izay tsy mitonona anarana. Ka dia isaorana azy be dia be manohana ny hetsika toy itony sady mahafoy mihitsy manome fanomezana ho famporisihina ireo mpandray anjara.
Notanterina tao amin'ny gazety Taratra laharana 3626, nivoaka tamin'ny Alatsinainy 8 febroary 2016, pejy 11, ny vokatra ofisialy tamin'ity fifaninanana ity. Isaorana mitafotafo no atolotra ny an'i Hary Razafy satria izy no namoaka ilay lahatsoratra tao amin'ny gazety taratra. Izy moa dia manohana hatrany ny hetsika ataontsika ary mahafinaritra hatrany ny fiaraha-miasa aminy sy ny gazety Taratra.
Fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra ireto olona manaraka ireto noho ny fanampiana sy fanohanana nataony ka antony nahatontosana an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana:
- ilay mpikambana tsy mitonona anarana nanome ny loka,
- Hary Razafy noho ny namoahany ny fifaninanana an-gazety,
- ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanomezana isa ho an'ireo tononkalo,
Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Dafy, Volatiana, ary Soamiely.
Dafy Noely, nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2016.
Sary nalaina nandritra ny lanonana fanomezana amboara ny Mpanoratry ny Taona 2017.
Naka ny sary: Tiana Mampionona.